Shiinaha Daanye inta jeer ee laalaabka ka qaadista mashiinka heerkulka kuleyliyaha 6.78MHz Soosaarka iyo Warshadda | Daanye
Mashiinka dariiqa mashiinka wiishka qaada ee tirtirka duufaanta ee Daanye 6.78MHz
Soo noqnoqoshada shaqada ugu fiican ee 6.78MHz;
Heerka dahabiga ah ee caalamiga ah ee la aqoonsan yahay ee ka bixida laalaabka iyo kahortagga gabowga, ayaa waxaa si weyn u ammaanay khubarada ku takhasustay warshadaha tobankii sano ee la soo dhaafay.
Jiilkii ugu dambeeyay ee thermagic rf, iyo sidii kii ka horreeyay, waxay sidoo kale isticmaashaa tamarta hirarka raadiyaha si ay maqaarka uga soo saaraan gudaha. Adoo ku bixinaya tamarta ka hooseysa dusha sare ee maqaarka saameyn isku mid ah, lakabyada maqaarka halkaasoo laga soo saaro collagen ayaa loo kululeeyaa si loo nadiifiyo kolajka jira loona abuuro collagen cusub, heerka caalamiga ah ee dahabka ee ka saarida laalaabka iyo qalabka da'da.
1. Wuxuu isku daraa tiknoolajiyada ugu fiican ee soo noqnoqda 6.78MHz iyo R134a qaboojiye firfircoon si loo sameeyo natiijada daaweynta ugu fiican ee dhibaatada gabowga maqaarka;
2. 6.78MHZ inta jeer ee raadiyaha: RF oo ah 6.78Mhz oo caalami ahaan loo aqoonsan yahay heerka dahabiga ee ka saarista laalaabka iyo ka hortagga gabowga, ayaa waxaa si weyn u ammaanay khubarada ku takhasustay warshadaha tobankii sano ee la soo dhaafay.
3. Tiknoolajiyada qaboojinta firfircoon ee R134a qaboojiyaha: Qaboojiyaha buufintu wuxuu isla markiiba hoos u dhigi karaa heerkulka maqaarka illaa iyo darajada 20. Iyo saxnaanta buufinta ee qaboojiyaha waa heer millisecond, waxay yareyn kartaa heerkulka dusha sare ee maqaarka hoosta xaaladda nabdoon ee epidermis, waxayna ku badin kartaa xaddiga tamarta RF maqaarka, hagaajinta ka-qaadista duuduubka iyo saameynta gabowga.
4. Ogaanshaha saxan diidmada xun: Baadhitaanka xakamaynta ayaa lagu sameeyaa saxanka taban ee jidhka ku xidhan, awoodda RF-na si firfircoon ayaa loo hagaajiyaa iyadoo la raacayo caqabadda si loo hubiyo xasilloonida xaddiga muditaanka RF.
5. Ogaanshaha heerkulka baaritaanka: 4 dareemayaasha heerkulka saxda ah ee saxda ah ((2 indhaha)) waxaa si siman loogu qeybiyaa gudaha baaritaanka wajiga 4.0cm2, kaasoo si firfircoon u hagaajin kara xaddiga buufinta ee qaboojiyaha sida uu qabo heerkulka maqaarka si loo hubiyo in heerkulka maqaarku uu ku dhexjiro meel aamin ah.
6. ogaanshaha cadaadiska ogaanshaha madaxa daaweynta iyo maqaarka: Soo ogow cadaadiska xiriirka ee u dhexeeya baaritaanka iyo maqaarka si looga hortago isbeddelka cadaadiska ee ay keento bini-aadamka intii lagu jiray hawlgalka inuu saameyn ku yeesho saameynta.
Falanqaynta mowjadaha RF-ga ee kala duwan
Shaashadda muujinta 12.1 inch shaashadda taabashada LCD midabka
Habka qaboojinta madaxyada daaweynta R134a qaboojiye leh qaboojin firfircoon
Habka qaboojinta mashiinka qaboojinta hawada
Awooda gelinta 800W
Madax daweynta (baaritaan)
Madaxa wajiga 4.0cm2-900 tallaal
4.0cm2-600 tallaal ((ikhtiyaar)
Madaxa hareeraha indhaha iyo sanka 0.25cm2-450 tallaal
Hore: Tartanka awoodda sare 30W CO2 jajabka iyo xubinta taranka adkeynta leysarka DY-CO2-VT
Xiga: Qalabka timaha lagu qurxiyo ee laser-ka ayaa doorta mashiinka timaha ka saarida maqaarka nooleynta ipl laser DY-A4